Su'aalaha badanaa la isweydiiyo - Shenzhen Huyssen Technology Co., Ltd.
Ma bixin kartaa shaybaarrada baaritaanka?
1-3 qaybood oo muunado ah ayaa la heli karaa oo wakhtiga dhalmada badiyaa 3-5 maalmood (Guud ahaan). Shaybaarada dalabka ee la habeeyay oo ku saleysan alaabadayada waxay qaadan doontaa qiyaastii 5-10 maalmood. Waqtiga caddaynta shay -baarka gaarka ah oo adag waxay ku xiran tahay xaaladda dhabta ah.
Ku saabsan khidmadda muunadda:
(1) Haddii aad u baahan tahay shaybaarro si loo hubiyo tayada, khidmadaha muunadda iyo khidmadaha dhoofinta waa in laga qaadaa iibsadaha.
(2) Muunad bilaash ah ayaa la heli karaa marka amarka la xaqiijiyo.
(3) Inta badan khidmadaha tusaalaha waa laguu soo celin karaa marka amarka la xaqiijiyo.
Intee in le'eg ayay tahay wakhtigaaga wax -soo -saarka?
Caadi ahaan waxay qaadan doontaa qiyaastii 15-20 maalmood.
Waa maxay shuruudaha bixintaada?
T/T, 30% bixinta T/T horay, 70% dheelitirka la bixiyay kahor dhoofinta ama lid ku ah nuqulka BL.
L/C marka la arko sidoo kale waa la aqbalaa.
Miyaad samayn kartaa caaryar cusub oo leh faahfaahinta la habeeyay ee aan u baahanahay?
HAA, Waxaan samayn karnaa cabbir la habeeyay iyo faahfaahinta.
Waa maxay waqtiga hogaaminta caadiga ah?
Badeecadaha caadiga ah, waxaan kuugu soo diri doonnaa badeecado 7-15 maalmood oo shaqo gudahood kadib markaan helno lacagtaada. Alaabooyinka gaarka ah, 20-35 maalmood ka dib marka la helo 30% deebaajiga T/T ama L/C marka la arko.
Sidee bay tayadaadu u xakameysaa?
Waxaan leenahay kooxda QC qaybteenna 3aad oo baarta amar kasta haddii loo baahdo.
Ma booqan karaa warshaddaada?
Waxaan si diiran u soo dhaweynaynaa in ay na soo booqdaan. Si kastaba ha noqotee, inta lagu jiro cudurka faafa, waxaad u baahan tahay inaad sameysid ogaanshaha Nucleic acid iyo go'doomin markaad timaaddo Shiinaha oo qaadan doonta waqti dheer. Sidaa darteed, waxaan ku talinaynaa macaamiisheena qaaliga ah iyo asxaabteena inay na soo booqdaan cudurka faafa kadib, si diiran ayaan u soo dhaweyn doonaa.
Sideen u dooran karnaa habka maraakiibta?
Amarka yar, waxaan kuu soo jeedin doonaa inaad doorato muujinta, sida DHL, FEDEX, UPS, TNT, iwm. Amarka weyn, waxaan kuu soo jeedin doonnaa inaad ku doorato badda Haddii aad degdeg tahay, waxaad ku dooran kartaa hawo. Waxaan kaa caawin doonaa inaad doorato habka maraakiibta ugu waxtarka badan sida waafaqsan shuruudahaaga faahfaahsan.
beddelidda korontada hab hab, Led Strip Light Power Supply, Awoodda Awoodda Isbeddesha, Awoodda Awoodda La -habeeyay, Led Strip Light transformer, Awooda Korantada Dc,